भिडियो – Page2– Light Nepal
मार्था राई तीन महिनकी सुत्केरी, चिया पसले हुँदै ट्याक्सि ड्राईभर (भिडियोसहित)
July 15, 2019 लाइट नेपालLeaveaComment on मार्था राई तीन महिनकी सुत्केरी, चिया पसले हुँदै ट्याक्सि ड्राईभर (भिडियोसहित)
रुपनी जि.एम, काठमाण्डौ । गएको हप्ता भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा एक जना क्यान्सर पीडितको रिर्पोटिङ्ग गरि फर्किर्दै थिएँ । अस्पतालको गेटबाट बहिरिदै गर्दा मेरो आखाँ ट्याक्सि चलाएर एक जना बिरामीलाई अस्पताल भित्र छोड्दै गरेको महिलामाथि पर्न गयो । आफ्नो काम सकेर झोला बोकी म घरतिर फर्कदैं गरेको मान्छे उनलाई ट्याकि चलाएको देखेपछि धेरै पहिला नै उनी […]
नायक आकाश श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे प्रेमीका (भिडियो)
July 12, 2019 लाइट नेपालLeaveaComment on नायक आकाश श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे प्रेमीका (भिडियो)
काठमाडौँ । चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठ पछिल्लो समय म्यूजिक भिडियोमा पनि उति नै ब्यस्त छन् । उनले अभिनय गरेको पछिल्लो म्यूजिक भिडियो हातमा रुमाल हो । जसमा उनलाई अभिनयमा श्रृष्टी श्रेष्ठले साथ दिएकी छिन् । विशाल गौतम शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीतमा नरेन्द्र बियोगीको एरेन्ज रहेको गीतमा सन्तोष राजवहाकको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा उत्सव दाहालको […]
July 11, 2019 rupaniLeaveaComment on स्तन क्यान्सर र छोराछोरी दुवैको पीडामा छटपटाउँदै चन्द्रकला (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ २६ अषाढ । “तीन वटा मसिना नानीबाबुहरु छोडेर आको छु । के गर्दैछन् ? थाहा छैन । परिक्षा दिए कि दिएनन् ?” यो भनाई हो क्यान्सरले ग्रस्त अस्पतालको बेडबाट आफ्ना बालबच्चाहरुको सम्झनामा छटपाटाई रहेकी आमा चन्द्रकलाको । जब उनलाई भेट्न भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुगें मसंगको पहिलो वाक्य नै यही थियो चन्द्रकलाको । उमेरले ४५ […]
अल्पायुमै छोरा गुमाएका प्रचण्डलाई फेरी बल्झियो पीडा : ३८ औं जन्मजयन्तीमा प्रकाशलाई सम्झेर यसरी भक्कानिए (भिडियो हेर्नुस्)
July 3, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on अल्पायुमै छोरा गुमाएका प्रचण्डलाई फेरी बल्झियो पीडा : ३८ औं जन्मजयन्तीमा प्रकाशलाई सम्झेर यसरी भक्कानिए (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौँ, १८ असार । छोराको जन्म दिनमा प्रचण्ड भकानिएर रोएका छन।विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले स्व।प्रकाश दाहाल साहसिक योद्धा र कुशल व्यवस्थापक भएको बताएका छन् । उनीहरुले प्रकाशले समाजमा गरेका राम्रा कामहरुको अनुशरण गर्न सक्नुपर्ने पनि बताए । प्रकाश दाहालको ३८ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठानद्धारा मङ्गलबार आयोजित सगरमाथा आरोही सम्मान कार्यक्रमका सहभागीहरुले सानै […]
June 28, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on यसरी भएको रहेछ युवतीहरुलाई सिरिन्ज आक्रमण, भिडियो भयो सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, १३ असार । काठमाडौंमा पछिल्लो समय युवतीहरुलाई सिरिन्ज आक्रमण गरेको घटनाले युवतीहरु त्रसित भएका छन् । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा युवती माथि भएको सिरिन्ज आक्रमणको भिडियो पत्ता लगाएको छ । सिसिटिभी फुटेजमा सो दृष्य कैद भएको हो । प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजका आधारमा आक्रमणकारी समेत पक्राउ गरेको छ । ढल्कुमा एक युवती माथि भएको आक्रमणको भिडियो […]
June 28, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on घरको दुई तलामाथि वाट खस्दै गरेकी दुई वर्षकी बालिकालाई यि युवाले यसरी बचाए (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । एक जना ब्यक्ति बाटोमा त्यसै टहलीरहेका थिए । उनको दिमागले के सोच्यो कुन्नी सडकमा उभिएर सडक किनारमा ठडिएका अग्ला अग्ला घर हेर्न थाले । त्यही बेलामा एउटी दुई बर्षकी बालिका दुई तलाको वरण्डामा जोखिम अवस्थामा थिइन् । ति युवालाई लाग्यो बालिका कतै भुईमा त खस्दिनन् ? उनले केहीबेर ति बालिकाको कृयाकलाप हेरीरहे । […]
June 27, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on नेपालमै छ यस्तो ठाउँ जहाँ बाँदर र मानिस संगै डेटिगं जान्छन् (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, १२ असार । मानिस र बाँदरको डेटिगं बस्ने एउटै स्थान छ भनेको सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । मानिसलाई मात्र होइन पशुलाई पनि माया प्रेमको खाँचो हुन्छ । काठमाडौं नजिक एउटा यस्तो स्थान छ जहाँ बाँदरहरु पनि डेटिगंमा बसेका हुन्छन् । एक अर्कालाई माया गरेर आलिंगनमा बाँधिएर बसेका बाँदरका जोडी देख्दा तपाई हामी सबैलाई […]
June 25, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on आमाबुवा जिवितै भएर पनि टुहुरा दाजुभाईको जिवनमा दैव लाग्यो ‘ठुलो भएर ऋण तिर्नेछु मेरो भाइलाई बचाउनुहोस्’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, १० असार । आमाबुवा टाढा भए । करिब एक दशक देखि दाजुभाई आमाबुवाको संरक्षण बिनानै हुर्किएका थिए । आमाबुवाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने दाजुभाईले अनुभव गर्ने मौका पाएनन् । त्यही दाजुभाईको यस्तो जोडीलाई फेरी दैव लाग्यो । भाईको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । अस्पतालको शैयामा भाईलाई सुताएर दाई भाईको जिवन रक्षाको भिख मागिरहेका छन् […]
June 25, 2019 June 25, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on अघोरी बाबा फिल्म खेल्दै, ‘लगौँटी’का लागि आयो बाबालाई अफर (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं, १० असार । अहिले सामाजिक सञ्जाल र युट्युवमा निकै भाइरल भइरहेका अघोरी बाबाले आफ्नो नयाँ चाहना ब्यक्त गरेका छन् । अघोरी बाबा अब फिल्ममा खेल्न चाहन्छन् । सामाजिक सञ्जाल र युट्युवमा हिट भएपछि अघोरी बाबाले आफुलाई फिल्ममा अभिनय गर्ने चाहना भएको बताएका छन् । उनले तर त्यसका लागि जे पायो त्यही रोलमा भने अभिनय […]